Shirkadda Oomaar (OMINCO GROUP) Maxay u dhawran waday Bulshada ay Macaashka ka hesho? | Saxil News Network
Shirkadda Oomaar (OMINCO GROUP) Maxay u dhawran waday Bulshada ay Macaashka ka hesho?
Shirkadda Omar oo ka kooban qaybo kala duwan, ayaa ka mid ah Shirkadaha Somaliland Ganacsigoodu sida wayn uga shaqeeyo, isla markaana u gudubtay ama ganacsigeedu gaadhay qaybo ka mid ah dalalka caalamka iyo Bariga Afrika-ba oo la isku yidhaahdo OMINCO GROUP.
Waa Shirkad uu leeyahay Nin Ganacsade ah oo reer Somaliland iyo Reer Jabuuti-ba ah, waa Shirkad dalka keenta Ganacsiyada kala duwan ee Cuntooyinka ama Quutal-daruuriga, Sida Bariiska, Sonkorta, Daqiiqda, Saliidda, Kalluunka, Baastada iyo Noocyo kale oo cunto.
Sidoo kale, waxay dalka keentaa Sigaarka Beensalka loo yaqaanno. Waxay leedahay qayb Xawaalad ah ama lacagaha kala xawisha, inkastoo aan weli taas taabbo-gal loo arkaynin haddana way jirtaa. Waxa weeye Shirkad muddo dheer shaqaynaysay, sidoo kale Bagaashka qaarkii ayay keentaa, waxay leedahay Waaxda Alaabaha kula xawisha ee Koontiinerrada.
Haddaba, waxaa isu kay qaban wayday oo igu kelliftay inaan Maqaalkan qalinka u qaato, markii aan arkay heerka sare ee Shirkaddaa Ganacsigeedu marayo iyo sida aanay dan uga lahayn Nolosha Bulshada ay ka ganacsanayso. Sababtoo ah, waxaan arkay, dad badanna ka maqlay, marar kala duwanna Warbaahinta dalka qaarkeed ku arkay Raashin dhacay oo Shirkadda Oomaar dalka soo gelisay, Sigaar dhacay oo Bulshadu ka qaylinayso.
Inkastoo aanu marka horeba Sigaarku caafimaadka Aadamaha u roonayn ee uu dhibaato ku hayey, haddana khatarta Beensalka dhacay ee Oomaar keenaa waxay ku haysaa Bulshada isticmaasha dhibaato laxaad leh oo ka sii badan tii uu marka horeba lahaa.
Sidaa daraaddeed, waxaan leeyahay waxa habboon in Shirkadda Omar (Oomaar) qiimayso Dakhliga ama macaashka ay bulshada ku dhaqan Somaliland ka hesho, taa beddelkeedana ay Bulshada u iibkeento wax tayo ahaan la isku hallayn karo oo aan Caafimaadka dadweynaha waxa dhibaato ah ku keenaynin illeen waa dadkii ay ka macaashaysay ee macmiisha u ahaaye.
Waxaan sidoo kale, soo jeedin lahaa Hay’adda magac-u-yaalka ah ee loogu yeedho Haya’dda dhawrista Tayada (Quality Cantrol) inay Bulshada Somaliland ee ay u xil-saaran tahay inay ka eegto tayada waxa dalka soo galaya, gaar ahaan Cuntooyinka iyo waxa dadku isticmaalayo inay gudato doorkeeda masuuliyadeed iyo waajibaadka saaran ee ah hubinta tayada waxa dalka soo galaya.
La Soco Xogo iftiiminaya Caddaymo la xidhiidha waxyaabaha Qormadan aynu ku soo qaadannay iyo xidhiidho dhex-maray Shirkadda iyo Hay’adda dhawrista Tayada.
Maxamed Cabdi Ismaaciil (Shiine)
Shabakada Saxilnews.com Kama Masuul Ah Fikirka Iyo Qoraalada Bulshada ………….. Fikirkaagu Waa Xor Qalinkaagu Waa Xor Maankaagu Waa Xor …………. Ku Dhiiro Fikirkaaga Ka Dhiibo Argtidaada Ka Gaadh Hadafkaaga …